cartanews.com | Archive | SPORTS NEWS
VIDEO:- War-baahinta oo soo bandhigtay Muuqaal aad u Xikmad badan oo ka Turjumaya caruur hooyadood ay qabaan rag kale.
Nairobi(CNA) Waxaa haatan soo shaac baxday sheeko gaaban oo aad u cajiib badan taasi oo ka turjumaysa in ay caruurtu ka xishoodaan ragga qabba hooyooyinkooda, Arintaan ...	More SPORTS NEWS News
DHEGEYSO:- Maamulka xafiiska Ra,isal wasaaraha Soomaaliya oo daaha ka qaaday in loo diiday dhaqaalihii iyo mushahaaraadkii ay lahaayeen.
Muqdisho(CNA) Shaqaalaha xafiiska Ra,isal wasaaraha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cabasho xad dhaaf ah ka muujiyey mushaharkoodii oo aysan mudo ...	Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud oo ka hadlay Arinta Dowlada Kenya ay ka waddo xaafada Soomaalida ee Islii iyo doorkiisa.
Muqdisho(CNA) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in dib loo ...	DHEGEYSO:- Puntland oo ka digtay kana war-bixisay duufaan la sheegay in ay ku soo wajahan tahay Afar Gobol oo ka tirsan dhulkaasi.
Xaafuun(CNA) Waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo sheegaya in duufaan culus ku soo wajahan tahay qeybo ka mid ah Gobollada ...	VIDEO CUSUB:- Wargeysyada Britian oo soo bandhigay Mulkiilayaasha ugu taajirsan Kubbada cagta Britian.
London(CNA) Waxaan halkan idinkugu soo bandhigeynaa Magacyada Shaqsiyaadka ugu taajirsan Dalka Britain marka laga eego dhanka Ciyaaraha iyadoona Hogaanka uu u ...	Kooxda Barcelona oo walaac daran ka qabta dhaawacii soo gaaray xiddiga aduunka Leo Messi kulankii Benfica.
Barcelona(CNA) Warar hordhac ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in dhaawacii Lionel Messi ka soo gaaray kulankii Benfica inaysan aheyn dhaawac ...	War-bixin Buuxda:- Champions League oo la dhameeyey wareegii Group-yada iyo sidda loogu soo kala baxay kaalamiha.
Surich(CNA) Waxaa caawa la ciyaaray kulamadii ugu danbeeyay ee wareega group-yada ee Champions League, waxaana la xaqiijiyay 16ka kooxood ee u ...	Kooxda Chelsea oo xili ay guulaystay laga reebay Champions League iyo Juventus oo si rasmi ah u gudubtay iyo wararkii kale ee Champions Leage.
Keiv(CNA) Kooxda Chelsea ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee iyadoo heysata koobka Champions League ku harta wareega group-yada taariikhda Champions League, ...	Muwaadiniin u dhashay koonfurta Kuuriya mudana lagu haystay dalka Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey dalkaasi.
Seol(CNA) Afar muwaadin oo u dahsya dalka Konnfur kuuriya oo in mudo ah gacanta ugu jiray kooxaha burcad badeeda Soomaalida oo ...	WARAYSI:- Dr, Xuseen Xaaji Khaaliif oo ah xilibaan ka tirsan Baarlamanka oo si kulul uga hadlay Arinta Gaas ee Puntland.
Riyaadh(CNA) Dr, Xuseen Xaaji Khaliif oo ah mudane ka tirsan Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa uu markii ugu ...	More »
FALANQAYNTA CIYAARAHA	VIDEO:- War-baahinta oo soo bandhigtay Muuqaal aad u Xikmad badan oo ka Turjumaya caruur hooyadood ay qabaan rag kale.	January 19, 2013 Nairobi(CNA) Waxaa haatan soo shaac baxday sheeko gaaban oo aad u cajiib badan taasi oo ka turjumaysa in ...	DHEGEYSO:- Maamulka xafiiska Ra,isal wasaaraha Soomaaliya oo daaha ka qaaday in loo diiday dhaqaalihii iyo mushahaaraadkii ay lahaayeen.	December 30, 2012 Muqdisho(CNA) Shaqaalaha xafiiska Ra,isal wasaaraha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa cabasho xad dhaaf ah ka muujiyey mushaharkoodii ...	Madaxweynaha Soomaaliya Xasan sheikh Maxamuud oo ka hadlay Arinta Dowlada Kenya ay ka waddo xaafada Soomaalida ee Islii iyo doorkiisa.	December 26, 2012 Muqdisho(CNA) Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay ...	DHEGEYSO:- Puntland oo ka digtay kana war-bixisay duufaan la sheegay in ay ku soo wajahan tahay Afar Gobol oo ka tirsan dhulkaasi.	December 24, 2012 Xaafuun(CNA) Waxaa soo baxaya warar dheeraad ah oo sheegaya in duufaan culus ku soo wajahan tahay qeybo ka ...	VIDEO CUSUB:- Wargeysyada Britian oo soo bandhigay Mulkiilayaasha ugu taajirsan Kubbada cagta Britian.	December 17, 2012 London(CNA) Waxaan halkan idinkugu soo bandhigeynaa Magacyada Shaqsiyaadka ugu taajirsan Dalka Britain marka laga eego dhanka Ciyaaraha iyadoona ...	Kooxda Barcelona oo walaac daran ka qabta dhaawacii soo gaaray xiddiga aduunka Leo Messi kulankii Benfica.	December 6, 2012 Barcelona(CNA) Warar hordhac ah oo soo baxaya ayaa sheegaya in dhaawacii Lionel Messi ka soo gaaray kulankii Benfica ...	War-bixin Buuxda:- Champions League oo la dhameeyey wareegii Group-yada iyo sidda loogu soo kala baxay kaalamiha.	December 6, 2012 Surich(CNA) Waxaa caawa la ciyaaray kulamadii ugu danbeeyay ee wareega group-yada ee Champions League, waxaana la xaqiijiyay 16ka ...	Kooxda Chelsea oo xili ay guulaystay laga reebay Champions League iyo Juventus oo si rasmi ah u gudubtay iyo wararkii kale ee Champions Leage.	December 6, 2012 Keiv(CNA) Kooxda Chelsea ayaa noqotay kooxdii ugu horeysay ee iyadoo heysata koobka Champions League ku harta wareega group-yada ...	Muwaadiniin u dhashay koonfurta Kuuriya mudana lagu haystay dalka Soomaaliya oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey dalkaasi.	December 5, 2012 Seol(CNA) Afar muwaadin oo u dahsya dalka Konnfur kuuriya oo in mudo ah gacanta ugu jiray kooxaha burcad ...	WARAYSI:- Dr, Xuseen Xaaji Khaaliif oo ah xilibaan ka tirsan Baarlamanka oo si kulul uga hadlay Arinta Gaas ee Puntland.	November 10, 2012 Riyaadh(CNA) Dr, Xuseen Xaaji Khaliif oo ah mudane ka tirsan Baarlamaanka Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa waxaa ...	Copyright © 2012 cartanews.com> All Rights Reserved. Designed by : Eawhost Ltd